Ciidamada dowlad goboledka KGS oo gacanta ku dhigay carruur si qasab ah u askareeyen al-shabab - Awdinle Online
Ciidamada dowlad goboledka KGS oo gacanta ku dhigay carruur si qasab ah u askareeyen al-shabab
Dowlad goboleedka konfur galbed somalia ayaa ka warbixiyey howlgal ay ciidanka Xoogga dalka ku soo furteen caruur la sheegay in si qasab ah lagu askareeyey oo kooxda Al-Shabaab ku tababareysay deegaan hootaga gobolkaasi.
Carruurtaan oo tiradoodu tahay 9 iyo labo darawal oo u kaxaynaysay mooto seddex lugooleey oo ay saarnaayeen ayaa lasoo qabtay xilli ay marayeen inta u dhaxeysa deegaannada Abal iyo Labaatan-jirow ee ka tirsan Gobollada Baay iyo Bakool.
Xasan Salaad Ibraahim waa 12 sano jir sideed bilood ka hor Al-Shabaab ay ka kaxaysay deegaanka Dudumaale oo qiyaastii 30km dhanka bari ka xiga magaalada Xudur ee gobolka Bakool, waxaana uu xusay inay si qasab ah ku askareeyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay ka qafaasheen deegaankii uu ku noolaa.
Xilliga la qabanayey waxay la socdeen mootooyin nooca seddex lugleyda ah oo marayey inta u dhaxeysa deegaannada Abal iyo Labaatan-Jirow
Previous articleWASIIR HORE JUXA DADKA REER PUNTLAND LABA KHIYAAR AYAY KALA DOORAN DOONAN 22-SANO KADIB .
Next articleDaawo:-Cabdiraxman Cabdishakuur Warsame oo soo bandhigay Qodobadda ay ku fashilantay dowladda somaliya